एनआईसी एशिया बैंकले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने – Muktinath Times
काठमाडाैँ, ४ कात्तिक । एनआईसी एसिया बैंककले २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको मंगलबार बसेको संचालक समितिकाे बैठकले २० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हाे ।
एनआईसि एसिया बैंक हालसम्म बोनस घोषणा गरेका ४ बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी बोनस दिने बैंक बनेको छ।
यस अघि बोनस घोषणा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे बैंक, बैंक अफ काठमान्डौ र सानिमा बैंक रहेका छन् ।
पछिल्लो समय आक्रामक बजार विस्तारमा लागेको एनआईसी एशिया बैंकले हालसम्मकै उच्च लाभांस घोषणा गरेको हो ।
एनआईसिको संचालक समितिको ४६० औं बैठकले आ.व. २०७६।७७ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकले उक्त प्रस्तावित लाभांश मध्ये १९ प्रतिशत बोनश शेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनार्थ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैंकले गत आ.व. २०७६।७७ मा प्रति शेयर आम्दानी रू. ३१.८९ आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने खुद मुनाफातर्फ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ज्यादै कम वाणिज्य बैंकहरू मध्ये यस बैंकले २.४९ प्रतिशत (रू. ७.५२ करोड) को वृद्धि सहित रू. ३ अर्ब ९ करोड आर्जन गर्न सफल भएको थियो ।
बैंकको स्व–पुँजीमा प्रतिफल १९.२६ प्रतिशत रहेको छ र यस बैंक स्व–पुँजी प्रतिफलमा मुलुकका निजी क्षेत्रका बैंकहरू मध्ये प्रथम बैंक रहन सफल भएको छ ।